Ukubonakala kwintsimi yomntu ngamanye amaxesha kudlala indima enkulu. "Kwiingubo abadibana nazo, bajonge ingqondo" - umzekeliso, kunye nokusemandleni, ubonakalisa intsingiselo yombono ekubonakala kwawo. Kuninzi malunga nomntu onjani ongayichazela kunye nomfanekiso wakhe.
Okumangalisayo kukuba, indoda ende neyobukeka kunye nentombazana eqhelekileyo eneemilenze ezimfutshane iya kubheka ihlabathi ngokuhlukileyo, ukuvavanya imeko kunye nezigqibo ezithile.
Ukuvulwa kweengcali zeengqondo zeCanada uLiz Burbo kwakhokelela ekudakaleni kwamanqweno aninzi nabadumi. Ngokutsho kwengcamango yakhe, ngokomfanekiso, unokukwazi ukubona uhlobo lomntu, ukwesaba kunye neenqweno, iiminqweno kunye nesimo sengqondo kunye nehlabathi elikujikelezile. Ukususela eBourbaugh, wakhupha iintlobo ezi-5 zamanani kwaye, ngokufanelekileyo, iintlobo ezi-5 zobuntu, ezinobungozi bomntwana (ziboniswa emzimbeni wethu). Abantu abangenayo ingxaki yengqondo ayenzekanga, kunokuba (ukulimala) kunokubaninzi. Oku ngakumbi kubonakalisa intlungu yomntwana emzimbeni womntu, ngakumbi ukunyuswa kwengqondo kwiimeko zakhe zangoku.
Enyanisweni, loo ngxelo yombuzo iya kuba yinto emnandi kubabaninzi, kodwa kuyafaneleka ukuyiqonda ngokujulile, njengoko kucaca ukuba ingasetyenziselwa iinjongo zabo, ukuququzelela ubomi babo nobukho, ukuqala ukujongana neziganeko nokufunda ukuthetha nabantu kunye nehlabathi elikujikelezayo.
Umzimba omzimba onobuhlungu, amathambo angamaqheqha, amehlo oloyiko amehlo, ngamanye amaxesha abantu abanjalo bafana ne-anorexic. Olu hlobo lwabantu aluthandi ukutsala ingqalelo, kwisihlwele balahleka ngokukhawuleza baze bangabonakali.
Abantwana bayalimala xa besesisu. Kungenzeka ukuba babengabantwana abalinde ixesha elide kunye nokucwangciswa, ukukhulelwa kwenzeke ngengozi. Kwaye, xa abazali bebengakakulungeleli isinyathelo esinzulu, kubonakala sengathi umntwana akafunanga. Kodwa, ngenxa yothando okanye kwezinye iimeko, ukukhulelwa akuphazamiseki, kwaye umntwana wazalwa.
Abantu abanjalo abaqinisekanga ukuba banelungelo lokuhlala kuzo zonke, abanomdla kwimpahla yezinto eziphathekayo, bahlakaniphile ngokwaneleyo kwaye bahlakaniphile, kodwa kaninzi baziva bengenasidingo kwaye bafunyanwa yihlabathi lonke. Akukho mntu uyayiqonda okanye uyawamkela-bona ngokwabo bacinga njalo. Ngoko ke, ngokuqhelekileyo ukhetha indlela yokulondeka. Uloyiko olukhulu kubo luloyiko.
Umzimba omzimba oqhekezayo, umgudu ophothiweyo, amahlombe kunye nesimo esingapheliyo sibonakalisa uhlobo lwesibini lwabantu. Isibalo somntu onjalo sithe tye, kodwa asikho i-tonus namandla. Amehlo adabukile, ekhangele wonke umntu onogxininiso.
Ukulimala kwafunyanwa ngaphambi kweminyaka engama-3. Njengomthetho, ukukhathazeka kwengqondo kubangelwa ngumzali wesini esahlukileyo. Oku kungabikho kokuthatha inxaxheba kwintliziyo, umzekelo, omnye wabazali angahamba uhambo loshishino, kwaye umntwana wayebuhlungu, kuba ngaloo mzuzu kubalulekile ukuba abe nomzali.
Olu hlobo lwabantu luhlala lubhenk 'ingqalelo kwabanye ngabanye naziphi iindlela ezikhoyo. Kubalulekile ukuxhasa, ukuthatha inxaxheba ebomini babo, ukuthandana ngesondo, balwela ukuzimela, ngokuqhelekileyo baba ngabantu abadumileyo, ngomnqweno wokwanelisa isidingo sabo sokuba liziko lokuqwalasela.
Umntu ofana ne-kolobok, eyaziwa ngumzimba ogcweleyo, unamahlathi athobileyo, ubuso obuvulekileyo kunye nobukeka obuhle bujonga uhlobo lwesithathu.
Ingxelo ebukhali kunye neentlonelo ezamukelwa ngumntwana oneminyaka engaphantsi kwe-5 kunokubangela ukukhathazeka kwengqondo. Abantu abanjalo banentloni ngabo, bonke abantu kunye nayo yonke into. Nangona besazi kakuhle iimfuno zabo kunye neminqweno yabo, bayayihoxisa, bathatha ezinye iingxaki zabantu, bazame ukuzisombulula. Abantu abanjalo banomdla, besaba inkululeko.
Umzobo oboyiweyo, iinqabakazi ezinkulu, isifuba esincinci, ubona obunzulu behlukanisa abantu bohlobo lwesine.
Uxinzelelo lufunyenwe kwiminyaka engama-5 ngenxa yomzali wesini esahlukileyo, apho umntu edidekile. Abantu abanjalo balawula wonke umntu kunye nayo yonke into, zama ukuphatha, zama ukuphazamisa nayiphi na indleko. Banobuqhetseba, bengabandakanyeka, benze ngokukhawuleza kwaye bazimisele. Zininzi izicwangciso ezakhiwayo, ekuthi, njengombandela, azizalwanga.
Umzimba wokwenene kunye nomhle, ukukhula okuphezulu, ukunyameka okuphezulu kukuphawu lwesigaba sesihlanu. Abantu abanjalo banomkhuba wokucubungula umhlathi wabo, ukunyakaza kuyaboshwa.
Xa uneminyaka engama-6, omnye wabazali bomntwana akazange axabise izenzo kunye nezenzo zomntwana, ngaphezu koko, kulandelwa isigwebo. Abantu abanjalo bavame ukugqibelela kuyo yonke into, ngamanye amaxesha banomdla, ngamanye amaxesha bayabanda. Bafuna ukuthelekisa ngokwabo nakwabanye, ukuba ukuthelekiswa kwabo kwintlalo ngokwenene. Bayesaba ukulahlwa, abangabikho kubanda kunye nokungaqondi.
Iingxaki ekuphuhliseni ubudlelwane phakathi kwamadoda nabasetyhini
Indlela yokujongana nomona womyeni wakhe
Izizathu zobundlobongela ngesondo malunga nabasetyhini
Umthandazo wama-Orthodox we-Epiphany ngoJanuwari 19, 2018 ngaphambi kokubhada kunye namanzi
U-Julia Proskuryakova udaniwe yi post malunga noNain Yeltsin
Indlela yokukhohlisa ukutya